Nandositra Tany Ejipta ny Fianakavian’i Jesosy | Fiainan’i Jesosy
Tsy Tratran’ilay Mpanjaka Ratsy Fanahy Izy Ireo
NANDOSITRA NANKANY EJIPTA NY FIANAKAVIAN’I JESOSY
NENTIN’I JOSEFA NIFINDRA TANY NAZARETA NY FIANAKAVIANY
Nofohazin’i Josefa i Maria fa nisy vaovao maika. Vao avy niseho tamin’i Josefa tamin’ny nofy ny anjelin’i Jehovah ary nilaza taminy hoe: “Mitsangàna! Ento mandositra any Ejipta ny zaza sy ny reniny, ka aza miala any raha tsy efa milaza aminao aho. Efa hikaroka an’ilay zaza mantsy i Heroda mba hamonoany azy.”—Matio 2:13.
Soa ihany fa tonga dia nandositra tamin’iny alina iny izy telo mianaka. Fantatr’i Heroda mantsy izao fa voafitak’ireo mpanandro izy. Nasainy niverina tany aminy mba hilaza izay fantany ireo mpanandro, nefa nody fa tsy niverina. Romotry ny hatezerana i Heroda. Mbola te hamono an’i Jesosy izy ka namoaka didy fa tokony hovonoina ny zazalahikely rehetra roa taona no ho midina, tao Betlehema sy ny manodidina. Ny zavatra nolazain’ireo mpanandro no namantarany hoe tokotokony ho firy taona i Jesosy.
Nahatsiravina ny fandripahana an’ireo zazalahikely. Tsy fantatsika hoe firy no novonoina, fa dia nitomany sy nidradradradra aloha ireo reny namoy ny zanany. Tanteraka àry ny faminaniana ara-baiboly iray nolazain’i Jeremia mpaminanin’Andriamanitra.—Jeremia 31:15.
Efa nandositra nankany Ejipta ry Josefa telo mianaka tamin’izay ary nipetraka tany. Niseho tamin’i Josefa tamin’ny nofy indray ny anjelin’i Jehovah indray alina, ka nilaza hoe: “Mitsangàna! Ento ho any amin’ny tanin’ny Israely ny zaza sy ny reniny, fa efa maty ireo nifofo ny ain’ilay zaza.” (Matio 2:20) Hitan’i Josefa àry fa afaka miverina any an-tanindrazany ry zareo. Nahatanteraka faminaniana ara-baiboly iray koa izany, dia ilay hoe nantsoina hiala avy tany Ejipta ny Zanak’Andriamanitra.—Hosea 11:1.
Toa nikasa hipetraka tany Jodia i Josefa sy ny fianakaviany. Angamba tsy lavitra an’i Betlehema izany, tany amin’ilay nisy azy ireo talohan’ny nandosirany tany Ejipta. Fantatr’i Josefa anefa fa i Arkelaosy zanakalahin’i Heroda no mpanjakan’i Jodia, ary ratsy fanahy izy io. Nampitandrina an’i Josefa tamin’ny nofy indray i Jehovah. Nankany avaratra kokoa àry izy mianakavy ary nipetraka tao Nazareta any Galilia. Lavitra an’i Jerosalema, foiben’ny fivavahana jiosy, tao. Lehibe tao Nazareta i Jesosy, ka tanteraka ilay faminaniana hoe: “Hantsoina hoe Nazareanina izy.”—Matio 2:23.
Inona no nataon’i Heroda rehefa tsy niverina ireo mpanandro, ary ahoana no niarovana an’i Jesosy?
Nahoana i Josefa sy ny fianakaviany no tsy niverina tany Betlehema, rehefa tafaverina avy tany Ejipta?
Inona avy no faminanian’ny Baiboly tanteraka tao anatin’izany fotoana izany?
Fanontanian’ny Mpamaky, Desambra 2014
Inona no tian’i Jeremia hambara rehefa niresaka izy hoe mitomany an’ireo zanany i Rahely?
Nikarakara ny Fianakaviany Foana i Josefa
Ahoana no niarovan’i Josefa ny vady aman-janany? Nahoana i Maria sy Jesosy no nentiny nankany Ejipta?
Hizara Hizara Tsy Tratran’ilay Mpanjaka Ratsy Fanahy Izy Ireo